Ake zinike umzuzwana ucabange ngesimo ukuthi abantu balahlekelwe ikhono okuzwayo. Impela kufanele abahloniphe. Ayikho ukuzwa, akukho ukuhogela, akukho imibala. Abantu ongasakhululekile imizwelo. Asithi uhlezi umbuthano labangane ngokwemvelo, kodwa azikwazi ukuzwa icula, hhayi ukudlala isiginci, ngoba manje awukwazi uzwe umculo. Zonke ngikubone omnyama nomhlophe. Ukudla, kakhulu, engalethi noma iyiphi injabulo. Une into idle, ngoba nje ukudla - ke kuyimfuneko begazi. Ngobuso bakho Inkulumo nalutho. Phela, ungazizwa uthando nomunye. Ayikho uhleko. Kukhona ngisho smile. Ayikho uzwela friendly futhi ethuthumela imizwa yothando phakathi kowesilisa nowesifazane, isifiso sobulili .... Kanjani uthola themba? Yebo, ukuphila kwethu kungaba efile ngaphandle ikhono ukuzwa eziningi ezihlukahlukene imizwa, esivela indoda kusukela ekuzalweni. Ukuphila kwakungeke kujabulise futhi kakhulu isidina, akunjalo? Oh, yeka ukuthi kuyisibusiso ukuthi abantu babe nezinkolelo ezihlukahlukene ezifana imizwa nemizwelo!
Izinhlobo ezinkulu sinemizwa kungenziwa ihlukaniswe yaba ephakeme futhi aphansi. Ukuze wehlise imizwa konke ngokomzimba futhi izidingo bokuphila yomuntu (ukwaneliseka noma ukungeneliseki). Ukuze izinzwa ephakeme - ngokwengqondo, ngokokuziphatha, ngokomoya zokuziphatha amagugu yomuntu. Yilokho izinzwa ephakeme ukuthola umuntu ebonakala ezweni lakhe elingaphakathi.
Izinhlobo imizwa ezihlobene ukubonakaliswa eliphakeme:
- imizwa zokuziphatha - amagugu, imizwa, imicabango nezenzo lomuntu ngezizathu nokuhlola umphakathi. Njalo uhlobo umuzwa sehlukaniswe shades eziningi ezijulile. Ngokwesibonelo, sithatha ngomqondo wezimiso zokuhle, njengoba uthando. Kuhlanganisa ezihlukahlukene ukubonakaliswa, izifiso, izisusa nezenzo zethu. Uthando Ingabangela ububele, isihe nobubele, ukunakekelwa, kanye nezinye izinhlobo zako. It ihlukaniswe yaba ngothando nomunye amalungu omndeni kanye nezihlobo, uzwela friendly, yothando zocansi, kanye oluphakeme kakhulu lothando - izimiso zokuziphatha lapho abantu guided ngamabomu ezimpilweni zabo. Zonke lezi zinhlobo imizwa akunakubangelwa kuphela komunye - ukuze uthando. Ngaphezu yimuphi omunye emhlabeni sokudalwa kungekho ikhono lokuzikhethela lezi izimfanelo nemizwa yakhe - kuyinto umehluko ocacile oziphakamisa indoda ngenhla jikelele silwane.
- umuzwa tebuciko - ikhono ukubona kanye nokulinganisa ubuhle. Umuntu kuphela has a "esakhelwe" isifiso ukujabulela umculo, nemvelo, imidwebo - ubuhle ukuthi ecabanga nsuku zonke. Ngakho isifiso indoda ubuciko. Imisebenzi emangalisayo, noma kungaba umdwebo noma wobuciko zomculo - lokhu ubuso ihlukile ukuhlakanipha okuphakeme - womuntu.
- imizwa Intelligent. Ngokungafani nezilwane, eliqhutshwa isazela, indoda uyakwazi ukucabanga, ukuhlaziywa, ulwazi kanye neminye imisebenzi bokusungula. Umuntu kuphela uyacabanga injongo yokuphila futhi ikhambi ezinkingeni zembulunga yonke.
izinhlobo ezahlukene izinzwa womuntu - isitifiketi yethu ayinawo umsuka okungahleliwe. Futhi injabulo ekuphileni esikutholayo ngezinzwa zethu - kungobunye ubufakazi we plan, hhayi nje nesenzakalo ongacabangi indoda phakathi kwezinye izidalwa eziphilayo eplanethini yethu. Izinhlobo ekhombisa ephakeme othando - ithuba eliyingqayizivele, anikezwe kunendoda wedwa.
Imisebenzi izinzwa: kokuhlaziywa, ugqozi, isixwayiso, futhi umsebenzi ekhululekile of Kuhlanganisa ezishukumisa kusisiza nokuba sibone ukuthi wahlulele ukubaluleka okuthile, ukuhlela izinto eziza kuqala ekuphileni kwethu.
Ngokwesibonelo, cabangela izinkondlo, kwakha isimiso esiyinkimbinkimbi lemizwa umuntu, kuhlanganise izandla, izindlebe, amehlo kanye nobuchopho. Lezi ithuluzi omkhulu wenza ngokunemba okukhulu, asivumela ukuba multi-functional ngakho, futhi ukwazi ukudala. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi isandla sethu - okufanayo sense sitho njengoba ngezidladla nezilwane eziningi. Kodwa indlela omkhulu umehluko kuleli theku! A portrait, ngomusa pussycat ingane, uhala enalitini, nquma izinkuni noma ukudlala isiginci - okuyinto nje akakwazi ukwenza umuntu basebentisa tandla tabo. Ngaphezu kwalokho, iminwe - sizwele ethintekayo izinzwa.
Izinhlobonhlobo, ukusebenza kanye izinga imizwa yethu ukujula - ingenye ubufakazi bokuthi umzimba bethu amakhono ayo futhi umthamo ekuqaleni wacabanga. Futhi siyabonga umqondo elinjalo elimangalisayo, owawusekelwe ezimpilweni zethu!
Umuthi 'Timpanol ": yokusetshenziswa izilwane
Umngcele wase-Ukraine waphaphi ngaphambi kuka-1917?
Mans iviyo, "Game of Thrones": incazelo uhlamvu, amaqiniso athakazelisayo kanye nomlando
Indlela sikhule ulamula ekhaya: yezimfihlo zokuphumelela